म २७ बर्षिया महिला हुँ, मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ? « Npnews
म २७ बर्षिया महिला हुँ, मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ?
प्रकाशित मिति: October 7, 2017
म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । तीन वर्षको प्रेमपछि हाम्रो मागीविवाह भएको हो । विवाहअघि हामीबीच यौनसम्पर्क सीमित रूपमा सुरक्षित हिसाबले भैसकेको थियो । हाल विवाह भएको एक वर्ष पुग्यो । यौनसम्पर्क गर्दा मेरो श्रीमान्को वीर्य स्खलन एक मिनेटभित्र एकदमै छिटो भैहाल्छ, जसले गर्दा म सन्तुष्ट हुन सकिरहेकी छैन ।
यसका लागि उपर्युक्त उपाय के हुन सक्छ ? यौनसम्पर्क सामान्यतः कति अवधिको हुन्छ ? यौनसन्तुष्टिलाई पोजिसनले फरक पार्छ कि ? गर्भवती महिलाले यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन ? हुन्छ भने कुन पोजिसनमा गर्न सकिन्छ ?
शीघ्र स्खलन के हो ?
लिङ्ग अँठ्याउने ः यौनसम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग योनिबाट बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अँठ्याउने र वीर्य स्खलन हुन नदिने । यौन उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौनक्रिडा सुरु गर्ने ।
समय र धैर्यता निकै लाग्ने भए पनि वीर्य स्खलन नियन्त्रणमा यो अभ्यास निकै लाभदायक हुनसक्छ र यसमा श्रीमान्लाई तपाईंको पर्याप्त सहयोग चाहिन्छ ।
(यो सामग्री कान्तिपुर साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो)